FANOHANANA - Beijing Convista Flow Control Equipment Co., Ltd.
CONVISTA dia tsy manome torohevitra ara-teknika ho an'ny vahaolana fanaraha-maso fotsiny amin'ny dingana voalohany, ary koa manao asa fanadihadiana fanadihadiana ho an'ny tetikasa iray manontolo.
Ary ho an'ny serivisy aorian'ny serivisy, ny ekipa mpikarakara injeniera CONVISTA Field dia afaka manome valiny ara-potoana amin'ny filan'ny mpanjifa manerantany: vavolombelona sy fanohanana ara-teknika amin'ny fanendrena sy hanombohana sehatra, ny fikojakojana manidy ny fanaraha-maso, ny famahana olana ary ny fanamboarana ny serivisy, ny fisafidianana ny fitaovana, ny fikojakojana ary ny fiofanana momba ny asa.
Ny tanjon'ny CONVISTA farany indrindra dia ny hanome vahaolana azo antoka amin'ny fifehezana ny oniversite isan-karazany mifanohitra amin'ny takian'ny tetikasa samihafa.
Ahoana ny fomba hahatratrarana?
Step1: Ny ekipanay injeniera, amin'ny voalohany, dia handinika tsara ny fepetra momba ny serivisy momba ny serivisy, ny fepetra arahana ara-teknika sy ny toa azy, ka hamolavola fanombanana araka ny tokony ho izy;
Step2: Ny sampana ara-barotra ataonay dia hanombatombana ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana sy ara-barotra ary hamaly izany arak'izany ny lehiben'ny varotra;
Step3: Miorina amin'ny angon-drakitra etsy ambony, ny injenierantsika dia hisafidy ny karazana, fitaovana mety, valves sy hetsika miendrika havanana izay mifanaraka amin'ny takian'ny tetik'asa, ary koa, ho tombontsoan'ny mpanjifa, ny fitsitsiana vola koa dia ho iray amin'ireo heverin'izy ireo.
Step4: Ny ekipa ara-barotra dia hiasa ny vahaolana optimum, mandefa ny Quotation Teknika & Quotation ara-barotra amin'ireo mpanjifa amin'ny alàlan'ny mailaka E.
2．Fanomezana toky sy fanaraha-maso kalitao
Ny orinasa rehetra nahazo alalana tamin'ny CONVISTA dia tsy maintsy mitazona ny fankatoavana lehibe rehetra, ao anatin'izany ny ISO9001, API 6D, API 6A, CE / PED, HSE, API 607 ​​/ API 6Fa Afo azo antoka,
fa koa, tsy maintsy manana ny fomba fifehezana feno avy amin'ny akora ka hatramin'ny vokatra vita. Ny mpiasa sy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny anatiny dia mila manana fahaiza-manao tena tsara hanatanterahana fitsapana an-tsary Radio, fitsapana Ultra-sonika, Dye Penetrate, Zava-manintona Magnetika, Famantarana fitaovana miabo (PMI), fitsapana ny fiatraikany, fitsapana mafy, fitsapana mafy, fitsapana azo antoka amin'ny afo. , Fitsapana Cryogenika, fitsapana Vacuum, fanandramana fandefasana fandosirana ambany, fitsapana entona avo lenta, fitsapana hafanana ambony ary fitsapana Hydro-statika.
3． Fikarohana, fampandrosoana ary fanavaozana
CONVISTA dia manana fahaiza-manao betsaka amin'ny famolavolana valizy, miaraka amin'ny rafitra CAD / CAM (Solid Works) izay mitrandraka tanteraka ny fotoana ahazoana vahaolana momba ny injeniera vaovao sy mifaninana nefa manome antoka ny fanarahana ny fenitra mifandraika amin'izany.
CONVISTA dia niavaka tamin'ny famolavolana drafitra valves lehibe kokoa ho an'ny serivisy avo lenta sy ny hafanana, valves Cryogen Valves mahazaka harafesina ary vokatra manokana ho an'ny serivisy manokana.